version 0.9.0 – အသင့်ရှိ, setting ကို, သွား!
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2012 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု9comments
ထိုတွင် 12/12/12 (အဘယ်အရာကိုကချစ်စရာကောင်းတဲ့ရက်စွဲ) တွင် 20:12 (သင့်လျော်တဲ့အချိန်). ကျနော်တို့ version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ 0.9.0 ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့ plugin. ဒီဗားရှင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ settings ကိုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစာမျက်နှာ၏အဓိက rewritable ထည့်သွင်း. တစ်ဦး slick tabbed interface ကို Oh ဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအလွန်ရှည်လျား page မှ Moving.
ဒီဗားရှင်းကိုသာလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်လည်း settings ကိုအသစ်သောအဆင့်မြင့် tab ကိုဖွင့်ထားပြီးနှစ်ဦးကအဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုထည့်သွင်း:
1. အထောက်အပံ့ Debugging ၏ထည့်သွင်း: ယခုမှာအကြှနျုပျတို့မှတ်တမ်းများဖန်တီးရန် plugin ကိုစွမ်းရည်ကိုသုံးပြီးသင်ပိုကောင်းအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်, နှင့်ဝေးလံခေါင်သီ debugging ကိုခွင့်ပြု.
2. အဆင့်မြင့် Tag သီးသန့်စည်းမျဉ်းများ: ဒီ feature ကိုစာသားများသင့် site ပေါ်တွင်ဘာသာပြန်ချက်သည်ကျိုးလျက်ရှိသည်လမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြု. ဒါဟာအလွန်အနုစိတ်သော granulation ခွင့်ပြုနှင့်သင့်တိကျတဲ့အသုံးပြုမှုကိစ္စမှအင်ဂျင်သင့်လျော်.
သို့သော် – သတိ, သူတို့အား features တွေ, ကောင်းစွာစမ်းသပ်စစ်ဆေးသော်လည်းအဆင့်မြင့်နှင့်စမ်းသပ်ဆဲမှတ်သားထားတဲ့. သင်အကျင့်ကိုကျင့်သောအရာကိုနားလည်ပါ၏သာဆိုရင်သူတို့ကိုသုံးပါ.
ထည့်သွင်းဤမျှလောက်များစွာသောအခြား features နဲ့ bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများရှိပါသည်, ကထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပို့စ်ထိုက်, ယခုမူကားများအတွက်, ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းကူးသွားစေနိုင်ပါတယ်:
* select2 အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကဘာသာစကားအသစ်ရွေးချယ်ရေး widget က (အလံများနှင့်အတူ very nice ကို select လုပ်ပါ box ကို)
* လာမယ့် / ယခင်လုပ်ကွက်လျင်မြန်တဲ့အညွှန်းများအတွက် Added ctrl keys တွေ (ကို interface နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောမြန်နှုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်)
* ထို recommanded ပေးထားတဲ့ defaults မှ configuration file ကို reset ခွင့်ပြုအသစ်တခုက 'option ကို
* css နှစ်ဆယ်တကျိပ်နှစ်ပါးသောဆောင်ပုဒ်များအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ပေးထားကြောင်း
* ထို admin ရဲ့စာမျက်နှာများအတွက် subwidgets loading ရှောင်ကြဉ်ပါ
* Edition နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဘာသာစကားကိုအကြားကိုဖယ်ရှားဂုဏ်ထူး, ယခုဘာသာစကားတစ်ခုသာတက်ကြွစွာပါသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းသူဖြစ်နိုင်
* ရန် jQueriUI အသစ်ပြောင်းခြင်း 1.9.2 (jQuery ယခုဖြစ်သင့် 1.6+)
* အဟောင်းစတိုင်ဆွဲချမျာ​​းအတွက် z-index ကိုပြင်ဆင်ခြင်း (chemaz အားဖြင့် patch ကို)
* တရုတ်ရိုးရှင်းသော၏ဆက်ဆက်နှင့်ရိုးရာနှင့်အတူ bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
* အလွန်ဟောင်းနွမ်းဗားရှင်းမှအဆင့်မြှင့်ကာကွယ်ပေးနိုင် bug ကို Fix
* ဝစ်ဂျက်များကျွန်တော်တို့ function နဲ့တိုက်ရိုက်ဖန်တီးကြသောအခါသတိပေးချက်တွေချိုးနှိမ်
* ကို default language အတွက် urls ပြန်လည်ရှောင်ကြဉ်ပါ, အဓိကအားဖြင့်ထိခိုက် Canon
* ထို widget က default ဘာသာစကား၏ setting ကိုခွင့်ပြုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ script ကိုလိုအပ်နေပါသည်
* နောက်ဆုံးတွင် MSN ကိုပြဿနာဘာသာပြန်ရန်နှင့် CR / LF ဖြေရှင်းနိုင်
ကနဦးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အောက်ပါကာလ၌, သုံး bug တွေကြောင့်အဝတ်မခြုံဘဲနှင့် fixed ပါပြီ, ရိုးရှင်းတစ်ခုခုလုပ်မလုပ်လျှင်, သင့်ရဲ့ဖိုင်များကို refresh ဖို့သေချာပါစေ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: 0.9, bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, မှာ debug, ဗိုလ်မှူး, parser ကို, လွှတ်ပေး
ဇန္နဝါရီလ 9, 2013 တွင် 6:34 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 11, 2013 တွင် 12:28 နံနက်
ဒါကြောင့်, if I’ll fix it, I will have to do tons of work and testing, while harming users with current keys.
ဇန္နဝါရီလ 11, 2013 တွင် 2:43 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 22, 2013 တွင် 1:30 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 22, 2013 တွင် 1:32 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 22, 2013 တွင် 1:47 နံနက်
OOOH, I SEE. It’s now on the WordPress side! ပုံသေ. Love it!!!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Ofer.
ဇန္နဝါရီလ 27, 2013 တွင် 1:35 နံနက်
ဒါပေမဲ့, i need something more from you, ကျေးဇူးပြု. just for your info, my home page is statics without sidebar of course. 😀 that’s why, my visitor can not choose their language directly. i think i needashort code. can you give me please?
ဇန္နဝါရီလ 27, 2013 တွင် 1:39 နံနက်
There are also shortcodes, you can read all about them on our development site at: ကို http://trac.transposh.org
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2013 တွင် 7:44 ညနေ